'Tis The Season ... to Benchmark Against Isbeddellada Xilliga ah | Martech Zone
Jimco, Diisambar 22, 2017 Jimco, Diisambar 22, 2017 Douglas Karr
Bogagga sida tayda oo kale ah, xilliyada ciidaha waxay u muuqan karaan kuwo niyad jab leh markaan dib u eego falanqaynta. Guud ahaan taraafikada ayaa hoos u dhacday iyadoo ay weheliyaan taraafikada dabiiciga ah maadaama dhagaystayaashaydu u weecdeen habka fasaxa oo ay bilaabayaan inay dadaalaan ilaa sanadka cusub kadib Sidoo kale waa xilli aan ku qanciyo naftayda iyo macaamiishayda labadaba inaan sifiican u shaqeyneyno inkasta oo diidmo aan ku aragno bil-bil-bil ama hoos u dhac xilliyeed.
Fure u ah naftaada inaad ku kalsoonaato waa inaad ka faa'iideysato Isbeddellada Google oo ah jaangooyooyin lagu falanqeynayo taraafikadaada. Saaxiibadayda wanaagsan ee aan leeyahay an Xakamaynta cayayaanka Indianapolis shirkadda. Xilliga dayrta ayaa loo beddelaa jiilaalka, waxqabadka cayayaanka ayaa si aad ah hoos ugu dhacaya. Gudaha Google Analytics, waxaan aragnaa 40% taraafikada aan aragnay tan iyo xagaagii. Daawashada tirakoobyada hoos ayey u sii socotaa sida bil-bil ka badan oo kale ayaa noqon karta mid jahwareer leh, laakiin waa wax dabiici ah.
Waa tan muuqaalka guud ee raadinta ka hortagga cayayaanka ee Mareykanka. Dulsaarka ayaa lagu muujiyey inuu yahay tusmaynta xiisaha, markaa waad arki kartaa in xiisaha ugu sarreeyaa uu ku jiro xagaaga haddana hadda waxay ku dhowdahay 47.
Wali maadan dhamayn Sidoo kale waa inaad maskaxda ku haysaa inay jiraan gobollo juqraafi ah oo dalka gudihiisa ah oo leh xilliyo dhaadheer oo gaagaaban, ama xitaa bilooyin qabow aan lahayn, marka haddii aad tahay ganacsi maxalli ah waxaad u baahan tahay inaad falanqaynta u wareejiso aag magaalooyinka waaweyn ah . Waxaan xulanay gobolka metro Indianapolis, waadna arki kartaa in tusmada ay tahay 25.
Marka la eego isbeddelladan xilliyeed, waxaan ka dhigan karnaa taraafikada goobta ka soo horjeedda. Haddii dulsaarku yahay 25% ee danta ugu sarreysa xagaaga, waxaan isbarbar dhigi karnaa taraafikada boggeena iyo taraafikada dabiiciga ah ee ka soo horjeedda taas. Macmiilkani wuxuu hoos u dhacayaa ilaa 35% - maahan 75% ilaa xagaagii, sidaa darteed aad ayaan ugu qanacsanahay inay wali fulinayaan heer ka sarreeya. Gaadiidkeenna dabiiciga ah waa sannad-ka-sannad laakiin waxay hoos uga dhacaan 27%. Hase yeeshe, rajo kama qabo Waxaan ku soo marnay xilli fudud Midwest marka loo eego sanadaha kale sidaa darteed waa inaan filaynaa in dalabku sannadba sanadka ka dambeeyo sii kordhayo.
Miyaad fiirisay isbeddellada xiisaha xilliyeed ee meheraddaada oo aad ku calaamadeysay iyaga?
Tags: Analyticsisbedelka googleisbeddellada xilliyeedxilliyada